Tag: mmekọrịta ọha na eze | Martech Zone
Tag: mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Anyị na-aga n'ihu ịkụziri azụmaahịa na akụkọ ifo nke njiko na mmetụta a na-akọwaghị na mgbasa ozi mmekọrịta na-agafe mgbalị ahịa. N'ihi na teknụzụ akọghị na ọ na-esiri ike ịkọwa ire ahịa na mgbasa ozi mmekọrịta apụtaghị na ọ naghị eme. N'ezie, ọnụ ọgụgụ na-ekwu okwu na-abụghị: 71% nke ndị na-azụ ahịa nwere ike ịzụrụ ihe dabere na mgbasa ozi mgbasa ozi 78% nke ndị zaghachiri kwuru na akwụkwọ mgbasa ozi ndị enyi na-emetụta ha
Steeti nke Social Media Ecommerce
Monday, November 23, 2015 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Ọ bụ otu ihe iji kpọsaa site na mgbasa ozi mgbasa ozi ma kpọghachite ndị mmadụ na saịtị gị, mana nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta na-achọ ịme ka ntụgharị na ịbịaru nso ma chịkwaa ha n'ihu site na iweta ha n'ime nyiwe ha. Maka ndị na-enye e-commerce, nke a bụ nnabata maka na ọ siri ike ịlele ma hụ nzaghachi magburu onwe ya na ntinye aka na mgbasa ozi mmekọrịta ha na ntụgharị. Chọpụta na inwe aha na-abụ ihe ịma aka. N'ezie, maka mgbasa ozi mmekọrịta
Vine ahụ ọ bụ Diamond dị na Nsogbu nke Azụmaahịa Ọha?
Tuesday, June 9, 2015 Monday, June 8, 2015 Douglas Karr
Mgbe m nọ na IRCE, enwere m ezigbo obi ụtọ mgbe otu ọkà okwu, Danny Gavin, kwụsịrị m ma gwa m na ọ hụla m ka m na-ekwu okwu ọtụtụ afọ gara aga na ihe omume na Austin. Danny bụ otu n’ime ndị na - ere ahịa n’Intanet… na - emepe ihu ahịa ịntanetị na mgbasa ozi mgbasa ozi maka Brian Gavin Diamonds. Site na nka ya, enyerela ya aka ịkwalite BGD n'ogo nke 1000lọ Ọrụ E-Azụmaahịa Elu nke 50 na XNUMX Na-eto Eto Ntanetị Ntanetị. Anyị ga
Nkwụghachi ụgwọ mmekọrịta mmadụ na ibe gị: Nye ndị ahịa gị ụgwọ mgbe ha kesara
Wednesday, November 20, 2013 Wednesday, November 20, 2013 Douglas Karr
Otutu mmadu na enye ego ma nye gi inweta ndi ahia ohuru. Nke a bụ ezigbo nzuzu mgbe ị na-eche banyere ya, kedu maka ndị ahịa na-akwụghachi ụgwọ na-emefu ego? N'ezie, gịnị banyere ndị na-akwụghachi ụgwọ ọrụ ndị na-ekerịta eziokwu ahụ bụ na ha zụtara n'aka gị na netwọkụ mmekọrịta ha? Ugbu a na-enyocha ihe karịrị 30% ọnụego mgbanwe, Social Rebate bụ ikpo okwu na-egbuke egbuke. Ọbụghị naanị na ị na-eji okwu ọnụ ahịa, ị na-enyekwa ihe agbamume
Ecommerce Ego na Moontoast
Fraịdee, June 8, 2012 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Site na otutu ndi mmadu dabere na netwọkụ mmekọrịta na blọọgụ maka akụkọ na mmelite, elekwasị anya bụ itinye ndị ahịa na ndị ahịa nwere ike site na mgbasa ozi mmekọrịta. Agbanyeghị, maka ụlọ ọrụ, ntinye aka dị otú ahụ ma ọ bụ atụmatụ ụlọ na-ewu ewu ka ga-abụ mmega ahụ na-abaghị uru ma ọ bụrụ na ha anaghị atụgharị ụtụ na ego agbakwunyere Tinye Moontoast, nke mbụ na-ekesa mgbasa ozi azụmahịa, na-enye ụlọ ọrụ ohere ka ha na ndị mmadụ na-emekọrịta ihe site na mgbasa ozi mgbasa ozi, kesaa saịtị mmekọ na netwọk mgbasa ozi, ma nyochaa ego dị otú ahụ.